September « 2009 « Hamrosyangja.com :: syangja and waling bazaar latest news, people, photos and more.
लोकतन्त्र (बाल-कविता )
जनताको आन्दोलन उन्नाइस दिन चल्यो
सडकमा जता-ततै आगो समेत बल्यो
तानाशाही खत्तम होस् यही मुलमन्त्र
बिहानिको घाम जस्तै आयो लोकतन्त्र ।।
आक्रोशले ढाक्यो सबै गाऊ शहर बजार
बाइस जना मारिएछन् घाइते हजार-हजार
गोली हान्ने जेल जाओस यही मुलमन्त्र
सबै निम्ती समान छन् घाम अनी जुन
मनिसलाई अत्याचारी भेदभाव किन ?
शान्ती अनी समानता यही मुलमन्त्र
नबिर्सौ है जो कसैले शाहीदको गाथा
उनको त्याग बलिदान अर्को सगरमाथा
रगत खेर नजाओस है यही मुलमन्त्र
सौजन्य : झुल्के घाम (सचित्र बाल-कविता सङ्ग्रह)
सत्ता प्राप्तिकै लागि आन्दोलनः भट्टराई
एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादीको आन्दोलन सत्ता प्राप्तिकै लागि भएको समेत स्पस्ट पारेेका छन।
माओवादीलाई देशी–विदेशी मिलेर सरकारबाट हटाएकोले अब जनताको आन्दोलनले उल्ट्याएर छाडने उनको भनाई थियो।
उनले उपराष्ट्रपतिले राजीनामा दिएको भए राम्रो हुने धारणा राखे।
“हाम्रो पार्टीले उपराष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिनुहोस भनेको हो”- सोमबार सुनसरीमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको भटटराईले भने–राजीनामा दिनुभएन् गल्ती गर्नुभयो।’
डा. भट्टराईले उपराष्ट्रतिको हकमा भाषिक स्वतन्त्र हुदाँहुदै पनि अन्तरिम संविधानमा उल्लेख नगर्दा जटिलता देखिएको धारणा राखे।
उनले राष्ट्रपतिले चालेको कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दे जबसम्म राष्ट्रपतिको कदम सचिदैन तबसम्म जनताको पक्षमा सरकार नबन्ने बताए।
डा. भट्टराईले अहिलेको सरकार अर्काको इसारामा चलेकाले कुनै हौसियत नभएको पनि टिप्पणी गरे।
डा. भट्टराईले हासपोसामा खोलिएको शहीद स्मृति आवासीय विद्यालयको अवस्थाबारेको बारेमा समेत जानकारी लिए। यसक्रममा उनले राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने धारणा राखे।
भट्टराईले शहीद विद्यालयले समृद्ध नागरिक उत्पादन गर्ने मोडल स्कुल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । माओवादी नेतृत्वको सरकारले नेपालभरीका पाँच वटै विकास क्षेत्रमा शहीद विद्यालय खोलेको हो।
हासपोसामा रहेको शहीद स्मृति विद्यालयमा पूर्वी नेपालका १२ जिल्लाका ११० जना बाबुआमा गुमाएका बालबालिका अध्ययनरत्त छन्।
माधव, प्रचण्ड, गिरिजा, झलनाथ, उपेन्द्र र बाबुरामको संविधानसभा सदस्यता खारेज हुने
माधव नेपाल लगातार ३१ बैठकमा, प्रचण्ड ५० बैठकमा, गिरिजाप्रसाद कोइराला ५७ बैठकमा, झलनाथ खनाल ३१ बैठकमा, विजयकुमार गच्छदार २४ बैठकमा, उपेन्द्र यादव १८ बैठकमा, महन्थ ठाकुर २२ बैठकमा, राजेन्द्र महतो २२ बैठकमा, शेरबहादुर देउवा ४८ बैठकमा, डा . बाबुराम भट्टराई २१ बैठकमा, रामबहादुर थापा ‘बादल’ २० बैठकमा अनुपस्थित ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ७, धारा ६७ को उपधारा ‘ग’ मा स्पष्ट व्यवस्था छ ‘सभालाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा संविधानसभाका सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिनेछ ।’ संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार सबै प्रमुख दलका सबैजसो ठूला नेता संविधानसभा सदस्यबाट मुक्त हुने भएका छन् ।
नयाँ नेपालको नयाँ संविधान लेख्न भन्दै जनताबाट निर्वाचित ठूला दलका ठूला नेता बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएका कारण संविधानसभा सदस्यबाट पदमुक्त हुने भएका छन् । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले लगातार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नेताहरूले बेवास्ता गरेकाले संविधानतः ठूला नेताहरूको सभासद् पद खारेज हुने भएको हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग सात, धारा ६७ को ‘ग’ मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘सभालाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएका सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ ।’
अन्तरिम संविधान बनाउने नेताहरू नै लगातार अनुपस्थित भएर संविधानको खिल्ली मात्र उडाएका छैनन्, आफ्नै पद पनि गुमाउने अवस्था निम्त्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, सद्भावना अध्यक्ष्ा राजेन्द्र महतोको संविधानसभा सदस्यता संविधानतः खारेज भइसकेको छ ।
संविधानअनुसार कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र महासचिव रामबहादुर थापा बादल पनि अब सभासद् छैनन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ‘सभालाई सूचना नदिई लगातार दसवटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा’ सभासद्को पद रिक्त हुनेछ । संविधानसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार कुनै पनि ठूला नेताले बैठकमा आफू अनुपस्थित हुने पूर्वसूचना सचिवालयलाई गराएका छैनन् । बरु सभाध्यक्ष नेम्वाङले संवैधानिक व्यवस्थाबारे पटक-पटक सचेत गराउँदा पनि नेताहरूले वास्ता नगरेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार ठूला नेताहरूको संविधानसभा सदस्यता नै खारेज हुँदै छ भनेर सभाध्यक्षले संसदीय दलहरूमार्फत सबै नेतालाई चेतावनी दिएका थिए । ‘अध्यक्षज्यूले हाम्रैअगाडि पनि धेरैपटक भन्नुभएको छ । तर, नेताहरूले वास्तै गर्नुभएन,’ संविधानसभाका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासित भने ।
चिवालय यसबारे औपचारिक रूपमा बोल्नै चाहँदैन । ‘त्यो स्तरका नेताहरूको कुरा छ, कसरी बोल्ने ? तर, कुनै पनि नेताहरूले सचिवालयलाई अनुपस्थितिबारे पूर्वजानकारी गराएका छैनन्,’ संविधानसभा सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।
सचिवालयले राख्ने सभासद्हरूको हाजिरी रेकर्डअनुसार कांग्रेस सभापति कोइराला संविधानसभाको एउटै बैठकमा पनि उपस्थित छैनन् जब कि अहिलेसम्म ५७ वटा बैठक बसिसकेका छन् । उनले सचिवालयलाई अनुपस्थित हुने जानकारी पनि गराएका छैनन् । सभापति कोइराला तीनवटा बैठकमा भने उपस्थित थिए । तर पनि उनले सचिवालयको हाजिरी पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्ने ‘कष्ट’ गरेनन् ।
त्यस्तै, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा दुईवटा बैठकमा मात्रै उपस्थित छन् । सचिवालयको हाजिरी रेकर्डअनुसार पहिलो बैठक र गत वर्षकै ९ साउनमा बसेको नवौं बैठकमा मात्रै देउवाको उपस्थिति देखिन्छ । बाँकी ५५ बैठकमा उनी गयल छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिलेसम्म चार बैठकमा मात्रै उपस्थित छन् । सचिवालयको रेकर्डअनुसार प्रचण्ड गत वर्षको १५ जेठमा बसेको संविधानसभाको पहिलो र २९ जेठमा बसेको तेस्रो बैठकमा उपस्थित थिए । त्यसपछि उनी गत वर्षकै ६ साउनमा बसेको सातौं बैठकमा उपस्थित भए । गत वर्षको ८ साउनदेखि यस वर्षको ३२ साउनसम्मका ५० वटा बैठकमा उनी लगातार अनुपस्थित छन् ।
गत वर्षको २६ पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाट सभासद्मा मनोनीत भएका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संविधानसभाका ३ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित भएका छन् । २४ जेठमा बसेको ३५औं बैठकयताका २२ बैठकमा उनी लगातार अनुपस्थित छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल संविधानसभाका ५७ बैठकमध्ये १३ बैठकमा मात्रै उपस्थित भएका छन् । उनी गत वर्षको ३१ चैतमा बसेको २६औं बैठकमा अन्तिमपटक उपस्थित भएका थिए । त्यसयताका ३१ बैठकमा उनी लगातार अनुपस्थित छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार गत २१ जेठयताका कुनै पनि बैठकमा उपस्थित छैनन् । त्यसयता संविधानसभाका २४ बैठक बसेका छन् ।
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर २२ बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएका छन् । गत वर्षको २६ पुसदेखि यस वर्षको १२ असारसम्म बसेका बैठकमा उनी गयल छन् । संविधानसभा चुनावमा सर्लाही क्षेत्र नम्बर ६ बाट चुनाव हारेका ठाकुरलाई मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्षको २५ असारमा सभासद्मा मनोनीत गरेको थियो । गत वर्षको ४ साउनमा बसेको सातौं बैठकबाट संविधानसभामा उपस्थित हुन थालेका उनी अहिलेसम्म १५ बैठकमा मात्रै हाजिर छन् ।
फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव १८ वटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएका छन् । सचिवालयको रेकर्डअनुसार गत वर्षको २६ पुसदेखि यस वर्षको २७ जेठसम्म बसेका कुनै पनि बैठकमा उनी हाजिर छैनन् । उनी अहिलेसम्म संविधानसभाका १२ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित देखिन्छन् ।
सद्भावना अध्यक्ष तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतो अहिलेसम्म १० वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित छन् । गत वर्षको १४ पुसदेखि यस वर्षको ८ असारसम्म उनी लगातार २२ बैठकमा गयल छन् । ११ असारको बैठकमा उनी उपस्थित थिए । तर, त्यसयताका १६ बैठकमा उनी फेरि लगातार अनुपस्थित भएका छन् ।
माओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. भट्टराई पनि लगातार २२ बैठकमा अनुपस्थित छन् । सचिवालयको हाजिरी रेकर्डअनुसार उनी गत वर्षको २५ कात्तिकदेखि यस वर्षको १९ जेठसम्मका सबै बैठकमा गयल छन् ।
त्यस्तै, माओवादी महासचिव रामबहादुर थापा बादल अहिलेसम्म ७ वटा बैठकमा मात्रै हाजिर भएका छन् । गत वर्षको ८ साउनदेखि यस वर्षको १६ वैशाखसम्मका २० बैठकमा उनी लगातार गयल छन् । त्यसपछि पाँचवटा बैठकमा उपस्थित बादल १ साउनदेखि ३२ साउनसम्मका ११ बैठकमा फेरि लगातार अनुपस्थित छन् ।
संविधानसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार अन्य दर्जन नेताको पनि अनुपस्थितिका कारण सदस्यता खारेज हुन्छ ।
बिदा बसेका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालका लागि शुक्रबार आफ्ना स्पष्टीकरण राख्ने राम्रो मौका बन्यो । तीनवर्षे सेनापति कार्यकालमा उनले जे कुराहरू अनौपचारिक रूपमा राख्दै आएका थिए, त्यही कुरा उनले सयौं बहालवाला तथा पूर्वसैनिक अधिकारी, गन्यमान्य र प्रेसको सामुन्ने भने ।
भदौ २४ देखि तीनवर्षे पदावधि सकेर अवकाश पाउन लागेका सेनापति कटवालको बिदाइमा सेनाद्वारा आयोजित समारोहमा शुक्रबार उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका विवादको बचाउ प्रयास गरेका थिए ।
आफ्नो पदावधिको उत्तरार्द्धमा आएर माओवादी नेतृत्वको सरकारले हटाउन खोजेपछि विवादास्पद बनेका कटवालले सेनाबारे हाल बहसमा रहेका चार विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
उनले नेपाली सेनाको समावेशिता, माओवादी लडाकुको समायोजन, सेनाको प्रजातान्त्रीकरण र संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा भइरहेको बहसबारे करिब एक घन्टा समय खर्चेका थिए । उनले सामान्य टिपोटका आधारमा मौखिक मन्तव्य दिएका थिए ।
उनले सेनाको चरित्र विगतदेखि नै समावेशी रहेको जिकिर गरे । ‘सेनाभित्र विभिन्न पल्टन छन् । पूर्वी पहाडका राई/लिम्बुहरू, तराईका दाजुभाइहरू, गुरुङ र मगरको पल्टन छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले समावेशिताको नाममा सेनाको राष्ट्रिय संरचना नबिगि्रयोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ समावेशीकरणको नाममा सेनामा राजनीतीकरण गर्न खोजेको उनको आरोप थियो ।
‘राज्यले स्थापित गरेको मापदण्ड पूरा गरेका जोसुकै नेपाली नागरिक वञ्चित हुनु पर्दैन । कसैलाई लिने वा नलिने भन्ने कहीं कतै कसैले भनेको छैन,’ उनले भने, ‘जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रको नाममा प्रतिशत छुट्टयाउने हो भने त्यसले झन् झगडा मात्र बढाउने छ । यसले सेनाको राष्ट्रिय चरित्र बिगार्ने छ ।’
माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन सम्बन्धमा कटवाल बढी नै आक्रामक देखिए । तर उनले समायोजन गर्नै हुन्न भन्ने पक्षमा आफू नभएको पनि बताए । ‘के हो यो समायोजन भनेको ?’ आक्रामक शैलीमा भने, ‘दलहरूबीच यसअघि नै स्थापित मापदण्डहरू पूरा गर्नेलाई लिन सकिने भन्ने तय भइसकेको छ ।’
बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनाको कुरा उल्लेख गर्दै राज्यले स्थापित गरेको मापदण्डहरू पूरा गर्नेलाई लिन सकिने बताए । ‘समायोजनको नाममा राजनीतीकरण गर्न मिल्दैन । जोसुकै नेपाली जनतालाई पनि सेनामा भर्ना हुने अधिकार छ,’ उनले भने, ‘तर राजनीतिक दलका नाममा हतियार बोक्ने समूहलाई राष्ट्रिय सेनामा प्रवेश गराउन सकिँदैन ।’
उनले नेपाली सेनालाई हतियारधारी जत्थासँग नदाँज्न पनि चेतावनी दिए । ‘राज्यको सुरक्षाफौज जान नसक्ने कुनै पनि ठाउँ थिएन,’ उनले भने, ‘राज्यभित्र राज्यको अवस्था थिएन ।’ उनको भनाइ माओवादीले राज्य कायम गरेको अवस्था नभएकाले लडाकुलाई सेनासँग दाँज्न नमिल्ने भनाइ थियो ।
उनले सेनामा अन्य संस्थाहरूमा भन्दा बढी प्रजातन्त्र रहेको पनि जिकिर गरे । उनले भने, ‘सेनामा प्रजातान्त्रीकरण ? के हो अझ लोकतान्त्रीकरण ?’ उनले नेपाली सेना जहिले पनि संविधान र कानुनअनुसार चल्ने उल्लेख गर्दै एउटा व्यक्तिको सनकमा सेना नचल्ने बताए ।
सेनामा योग्यता र क्षमताको आधारमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै सेनाको रोलकल र दरबार परेडमा सबैले सबैसँग प्रश्न गर्ने र जवाफ पाउने व्यवस्था भएको बताए ।
‘नियम/कानुनसंमत चल्दा सेनामा सामन्तवाद भयो भन्ने हो भने लुट्ने, मार्ने र पिट्नेलाई चाहिँ के भन्ने ?’ उनले भने, ‘आफ्नो कुरा नमान्नेलाई जे पनि गर्नेलाई के भन्ने । मेरी श्रीमतीलाई बारम्बार सेतो सारी किन्यौ भनेर सोध्ने गरेका छन् । यसलाई के भन्ने ?’ सेनाको संख्याको विषयलाई लिएर भइरहेको बहसलाई पनि उनले असान्दर्भिक भने । ‘हाम्रा जवानहरू लाटा छैनन् । हाम्रा सिपाहीहरूले पनि बुझेका छन् सबै कुरा । उनीहरूलाई पनि बोल्न आउँछ । पीएचडी गरेका छन् । संसार घुमेका छन्,’ उनले भने, ‘तर उनीहरू राष्ट्रको इज्जतका लागि बोल्दैनन्, कानुनले बाँधिएका कारण बोल्दैनन् ।’
उनले सबै हतियारधारी समूहहरूले हतियार बुझाउँदैनन् र नयाँ प्रजातान्त्रिक संविधान लेखिँदैन तबसम्म सेनालाई चलाउनु नहुने बताए । ‘अप्ठ्यारो परेको बेला सेना रातारात बनाउन सकिँदैन । हामीले जुन अप्ठ्यारो अवस्था भोगिरहेका छौं, त्यो न विगतमा थियो न भविष्यमा नै हुनेछ,’ उनले भने, ‘जबसम्म मुलुकमा नयाँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार संसदको निर्वाचन हुँदैन, स्थिर शासन हुँदैन तबसम्म सेनाको संख्यामा बहस हुन सक्दैन ।’
उनले सेनाले नेपाली जनताको हक अधिकार र मानव अधिकारका लागि लडेको उल्लेख गर्दै नेपाली सेनालाई राजनीतीकरणबाट बचाउन भूमिका खेलेको भन्दै नागरिक समाज, राजनीतिक दल र राष्ट्रप्रमुखलाई आभार व्यक्त गरे ।
उनले संघीयताको नाममा मुलुकलाई फुटाउन खोजेको आरोप लगाए । पूर्वी पहाड र तराईमा भइरहेको सशस्त्र र निःशस्त्र आन्दोलनको सन्दर्भ उठाउँदै राष्ट्रिय अखण्डता रक्षाका लागि सेना सधैं प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरे । नयाँ नेतृत्वले सेनालाई राजनीतीकरण हुनबाट जोगाई सक्षम र निष्पक्ष नेतृत्व दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
गुरुङद्वारा कटवाललाई बिदाइ
साउन २५ गते बिदा बसेका सेनापति कटवाललाई कामु सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले औपचारिक रूपमा शुक्रबार बिदाइ गरेका छन् । उनको बिदाइ मन्तव्यमा जटिल र संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि सेनालाई संयमताका साथ संगठनको नेतृत्व दिएको उल्लेख गरे ।
उनले राजनीतिक परिवर्तनमा पनि सेनाको मनोभावनालाई उच्च राख्दै अनुशासित ढंगले स्वीकार गराएको उल्लेख गरे । छोटो मन्तव्यका क्रममा उनले मुलुक गणतन्त्रमा जाँदाका अवस्थामा समेत सेनालाई सही नेतृत्व दिन सकेको भन्दै त्यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको संज्ञा दिए । कामु सेनापतिले सेनाका तर्फबाट कटवाललाई उपहार प्रदान गरेका थिए भने कटवालले सेनालाई सम्झनाका लागि भन्दै गुरुङलाई उपहार दिएका थिए ।